Alfred Nobel kunye neMbali yeDynamite
I-Industrialist u-Alfred Nobel wasungula i-detonator ye-dynamite ne-nitroglycerin
Izabelo zeNobel zenziwe ngabani na ngaphandle koyi-Alfred Nobel. Kodwa ngaphandle kokubizwa ngegama elilodwa emva kweelinye lamabhaso ahloniphekileyo anikwa rhoqo ngonyaka ngempumelelo yezemfundo, yeenkcubeko nezenzululwazi, uNobel uyaziwa ngokukwenza abantu bakwazi ukuvuthisa izinto.
Ngaphambi koko konke, nangona kunjalo, i-industrialist yaseSweden , unjiniyela kunye nomvelisi wakha amabhuloho nezakhiwo kwisikhulu-ntloko sesizwe saseStockholm.
Yayingumsebenzi wakhe wokwakha owaphefumlela uNobel ukuba aphande iindlela ezintsha zokubetha idwala. Ngoko ngo-1860, uNobel waqala ukuzama ukusetyenziswa kwezinto ezinobungozi ezibizwa ngokuba yi-nitroglycerin.
Nitroglycerin kunye neDynamite
I-nitrolycerin yenziwa kuqala ngumakhemikhali waseNtaliyane uAscanio Sobrero ngo-1846. Kwimeko yendalo yamanzi, i-nitroglycerin yinto enzima kakhulu. UNobel waqonda oku kwaye ngo-1866 wafumanisa ukuba ukuxuba i-nitroglycerine ne-silica kwakuya kutshintsha i-liquid ibe yinto enokuthi i-dynamite. Enye inzuzo yokuba i-dynamite yayingaphezu kwe-nitroglycerin yinto yokuba ingaba ngumlingo wokufakelwa kwimigodi yokuloba esetyenziselwa ukumba.
Ngowe-1863, uNobel wasungula isilathisi sephepha lobunobumba beNobel okanye ikhefu lokuqhawula i-nitroglycerin. I-detonator isebenzisa ukutshitshiswa okukhulu kunokuba ubushushu obushushu buqhube izibhamu. Inkampani yaseNobel yakha umveliso wokuqala ukuvelisa i nitroglycerin kunye ne-dynamite.
Ngo-1867, uNobel wathola inombolo ye-patent yase-US 78,317 ngokuveliswa kwayo kweDynamite. Ukuze ukwazi ukutshatyalalisa iintonga zeDynamite, uNobel naye waphucula i-detonator yakhe (i-caption blasting) ukuze ibenokutshabalaliswa ngokukhanyisa i-fuse. Ngowe-1875, iNobel yasungula i-gelatine, eyayisisigxina kwaye sinamandla kune-dynamite kunye ne-patented yona ngo-1876.
Ngowe-1887, wanikwa ilungelo lobunikazi beFrentshi ngokuba "i-ballistite", i powder e-smokeless eyenziwe yi-nitrocellulose kunye ne-nitroglycerine. Nangona i-Ballistite yaphuhliswa njengenxalenye yombhobho omnyama , uguquko lusetyenziswa namhlanje njengesiqhumiso esinamandla se-rocket propellant.
Ngo-Oktobha 21, 1833, u-Alfred Bernhard Nobel wazalelwa eStockholm, eSweden. Intsapho yakhe yafudukela eSt. Petersburg eRussia xa wayeneminyaka engama-9 ubudala. UNobel wazibonga kwiindawo ezininzi ahlala kuzo ngexesha lokuphila kwakhe kwaye wayezicingela njengommi wehlabathi.
Ngo-1864, u-Albert Nobel wasungula iNitroglycerin AB eStockholm, eSweden. Ngo-1865, wakha i-Alfred Nobel & Co. Factory eKrümmel kufuphi neHurban, eJamani. Ngo-1866, wamisa i-United States ye-Blasting Oil Inkampani e-US Ngo-1870, wamisa i- Société jikelele ngokutsha kwe-dynamite eParis, eFransi.
Xa wafa ngo-1896, uNobel wachaza unyaka ngaphambi kwintando yakhe yokugqibela kunye nesigqibo sokuba ama-94 ekhulwini wezinto zakhe zonke zihamba ngokubhekiselele ekudalweni kwesikhwama sokunika inzuzo kwimfundo yesayensi, i-chemistry, isayensi yezobugcisa okanye i-physiology, umsebenzi weencwadi kunye nenkonzo uxolo. Ngenxa yoko, umvuzo weNobel unikezelwa ngonyaka kubantu abanomsebenzi onceda abantu.
Ingqikithi, uAlfred Nobel wayenamalungelo angama-patents amathathu namashumi amahlanu anesihlanu kummandla we-electrochemistry, optics, biology kunye ne-physiology.
Imbali yezixhobo zomculo
Iziseko zeeMatriki eziLawulayo (Maglev)
I-Top 10 Skateboarders yama-2000
Indlela yokuLawula nokuchonga i-American Beautyberry
Izinga eliphakamileyo Ukucinga: I-synthesis kwiBolom's Taxonomy
Excel COUNT Umsebenzi